Twitter FAQ - Sida Loo raaco User
Qof ayaa ku weydiiyay inaad raacdo on Twitter? Ama waxaa laga yaabaa in aad heshay email ah oo aad aragtay in qofku saxiixay xisaabteeda Twitter-ka ah? Ka dib dadyowga ku jira Twitter waa mid aad u fudud. Kaliya raac talaabooyinkan si aad u bilowdo.
Waqtiga Loo Baahan: 5 daqiiqo
Tag websaydhka bogga iyo saxiix. Haddii aadan hore u haysan xisaab, akhri sida aad ugu biiri lahayd Twitter .
Haddii aad hore u haysatid cinwaanka shabakadda qofka aad rabto inaad raacdo, ku dhaji kaddibna riix batoonka soo socda ee magacooda.
Haddii aadan hore u haysan cinwaanka, guji xiriirka Find Find ee bogga sare.
Waxaad ka heli kartaa dad adigoo ku qoraya magacooda ama magaca dhabta ah oo raadinaya iyaga. Markaad ku qorto liistada, riix batoonka raacsan.
Haddii aad haysato boosta Yahoo, Gmail, Hotmail, boostada AOL ama boostada MSN, waxaad ku heli kartaa raadinta Twitter iyada oo loo marayo cinwaanka emailkaaga si aad u hesho dad aad taqaan. Kaliya guji "Raadinta shabakadaha kale" tab, dooro adeegga aad u isticmaashid emailka, kuna qor warqadahaaga.
Haddii aad ku jirto bog qof oo aad rabto inaad raacdo, riix badhanka raacda hoose ee magacooda.
Ka dib markaad raacdo dadka aad soo socotaa waa mid aad u fudud. Dhinaca midig ee bogga, Twitter wuxuu ku siinayaa stats raacaya. Kaliya guji midka "raacayaasha" ee ku yaal qaybta dhexe. Tani waxay ku qori doontaa qof kasta oo adiga ku xiga. Si aad iyaga dib ugu noqotid, riix batoonka 'Raac'.
Waa maxay 'Troll' Internetka? Sidee Ayaan U La Wadaa Gawaarida?
Waa kuwan sida loo Isticmaalo Khariidadaha Google
Waa maxay YOLO macnaheedu yahay iyo sida loo isticmaalo
Polyvore: Dib u eegida Shabakada Adeegyada Bulshada ee Bulshada
Maxay Tahay TFTI?
50 Memes-yada Internetka ee Qummanahayaga
Sida Loo Tago Koontadaada Twitch
Iskudhafka Warfaafinta ee Isku-jira ee Netflix ama Hulu
8 Shirkadood ee ugu wanaagsan ee iibsanaya ee iibsanaya 2018
7 Ciyaartoyda ugu fiican ee la qaadan karo ee lagu iibsado sannadka 2018
Farqiga u dhexeeya Siidinta iyo Soo-dejinta Warbaahinta
Sida Loo Heli Karo Horumarinta Horumarinta IMovie
Sida Loo Helo Lost Windows Live Hotmail Password
Sida Loo Hubiyo U Qalmidda Loo Yaqaano iPhone
5 Cuntooyinka Dheeraadka ah ee Cuntada
Fariin Qoraal ah oo bilaash ah oo ku saabsan telefoonka casriga ah
Game PC: Mario Forever
Eudora 7.1 Barnaamijka Emailka
Diiwaangelinta Qalabka Cable / Satellite-ka ee DVD-ga DVD-ga
5 Noocyada Muhiimka ah
Sida loo Xaqiijiyo Xogtaada Gaarka ah Google Chrome ee Windows
9 Isticmaalka Logo-ga iyo Qeybaha
Skype Isbeddelada Laga Helo P2P ilaa Maab-Maab ​​Macmiil
Dhammaan Ku Saabsan Gabadha Internetka ee Mukhaadaraadka ah
Maxay tahay '1337 Leet?' Sidee kudbadeeysid 'kudheer hadalka'?
Sida Loogu Heli Karo ama Loo Fure Loo Wareego Faylka Faylka ee Windows XP
Waa maxay Pinterest?
Diiwaanka DVD-ga ma Diiwaangalin karaa Dolby ama DTS dhawaaqa?